Ummeli wezeMfundo kumantombazana, i-Target yeTaliban Shooting ngo-2012
UMalala Yousafzai, umSulumane ongumSilamsi owazalwa ngowama-1997, nguye oyena mncinci kunomdla weNobel Peace Prize , kunye nomgqugquzeli oxhasa imfundo yamantombazana kunye namalungelo amabhinqa .
UMalala Yousafzai wazalelwa ePakistan , wazalelwa ngoJulayi 12, 1997, kwisithili seentaba esibizwa ngokuthi yiSwat. Uyise, uZizondin, wayengumlobi, utitshala kunye nomlweli-ntlalontle, onomama kaMalala, wakhuthaza imfundo kwinkcubeko edlalwa imfundo yamantombazana nabasetyhini.
Xa eqonda ingqondo yakhe, wayikhuthaza ngakumbi, ukuthetha ngezopolitiko kunye naye ukususela kumncinane, nokumkhuthaza ukuba akhulume ingqondo yakhe. Unabantakwabo ababini, uKhusal Khan noApal Khan. Wakhulela njengomSilamsi, kwaye wayeyinxalenye yoluntu lwasePastun .
Ukuxhasa iMfundo yabamantombazana
UMalala wayefunde isiNgesi eneminyaka elilishumi elinesibini, kwaye sele sele sele ephakamileyo, ummeli onamandla kubo bonke. Ngaphambi kokuba eneminyaka engama-12, waqala iblogi, esebenzisa i-pseudonym, uGul Makai, ukubhala ngobomi bakhe bemihla ngemihla ye-BBC Urdu. Xa i- Taliban , iqela elikhuselekileyo kunye neqela lamaSilamsi elinobudlova, lafika e-Swat, wagxininisa iblogi yakhe ngakumbi kwiinguqu ebomini bakhe, kubandakanywa nokuvinjelwa kweTaliban ngemfundo yabantombazana , oku kuquka ukuvalwa, kunye nokutshatyalaliswa komzimba okanye ukutshisa , izikolo ezingaphezu kwe-100 zamantombazana. Wayembethe iingubo zemihla ngemihla waza wafihla iincwadi zakhe zesikolo ukuze aqhubeke nokuya esikolweni, nangengozi.
Waqhubeka ebhulogi, ecacisa ukuba ngokuqhubeka nemfundo yakhe, wayechasa amaTaliban. Wachaza ukwesaba kwakhe, kuquka ukuba unokubulawa ngenxa yokuya esikolweni.
I- New York Times yavelisa umqulu ngaloo nyaka malunga nokutshatyalaliswa kwemfundo yamantombazana yiTaliban, kwaye waqala ngokuxhasa ngokunyanisekileyo ilungelo lemfundo kubo bonke.
Wade wabonakala kumabonwakude. Kungekudala, ukuxhamla kwakhe kunye nebhulogi yakhe engabonakaliyo yaziwa, kwaye uyise wayifumelwa ukufa. Wavuma ukuvala izikolo ezixhunyiwe nazo. Bahlala ixesha elithile kwikampu yababaleki. Ngethuba lakhe kwenkampu, wadibana nommeli wamalungelo amabhinqa uShiza Shahid, ongumfazi wasePakistani owayengumcebisi kuye.
UMalala Yousafzai wahlala engathethi ngokuphathelele isihloko semfundo. Ngo-2011, uMalala uzuze umvuzo weSizwe woxolo.
Ukuqhubeka kwakhe ukuhamba esikolweni kwaye ngokukodwa ukubonakalisa kwakhe intshukumo kwakucaphukisa amaTaliban. Ngomhla ka-Oktobha 9, 2012, abagadi beempompo banqanda ibhasi yesikolo, baza bahamba. Bamcela ngegama, kwaye abanye abafundi babesabonisa kuye. Amadoda atshayayo atshayelwa, yaye abathathu abantombazana babetha iibhola. UMalala walimala kakhulu, wadutshulwa entloko nasentanyeni. I-Taliban yendawo yenze i-credit ngenxa yokudubula, ibeka isenzo sayo ngokusongela umbutho wayo. Ba thembisa ukuba baqhubeke bejolise kuye nakwintsapho yakhe, ukuba aphile.
Wafa phantse ngamanxeba akhe. Kwisibhedlele sendawo, oogqirha basusa ibhokhwe entanyeni yakhe. Wayesesidlangalaleni. Wadluliselwa kwesinye isibhedlele, apho oogqirha baphatha ingcinezelo kwingqondo yakhe ngokususa inxalenye yengqayi yakhe.
Oogqirha bamnike ithuba lokuphila.
Ukuxhaswa kweendaba zokudutshulwa kwakungalunganga, kwaye umphathiswa omkhulu wasePakistan wagxeba ukudubula. I-Pakistani kunye namazwe ngamazwe aphefumlelwe ukuba abhale ngokubanzi malunga nomgangatho wemfundo yabantombazana, kunye nendlela eyangena ngayo emva kwamakhwenkwe kwiindawo ezininzi zehlabathi.
Ingxaki yakhe yaziwa kwihlabathi lonke. Umvuzo weSizwe woLutsha lwePakistan wabizwa ngokuba yi-National Malala Peace Prize. Kuphela inyanga emva kokudubula, abantu baququzelele iMalala kunye no-32 Million Day Girls, ukukhuthaza imfundo yamantombazana.
Hambisa eBrithani enkulu
Ukuphucula okungcono ukulimala kwakhe, kwaye ukuba aphunyuke iintsongelo zokufa kwintsapho yakhe, iUnited Kingdom yamema uMalala kunye nosapho lwakhe ukuba bahambe apho. Uyise wakhe wakwazi ukufumana umsebenzi kwi-consulate yase-Great Britain, kwaye uMalala waphathwa esibhedlele apho.
Waphila kakuhle. Omnye utyando wafaka iplate kwi-intloko waza wamnika i-cochlear implant to offset loss of hearing from the shot.
Ngo-Matshi ka-2013, uMalala ubuye esikolweni, eBirmingham, eNgilani. Ngokuqhelekileyo kuye, wayesebenzisa ukubuyela esikolweni njengethuba lokubiza loo mfundiso kubo bonke abantombazana emhlabeni wonke. Wazisa ingxowa-mali ukuba ixhase loo nto, i-Malala Fund, inokuyisebenzisela inqabileyo yakhe yonkqenkqonkqo ukuba ixhase isizathu sokuba wayenomdla ngaye. I-Fund yenziwe ngokuncediswa ngu-Angelina Jolie. UShiza Shahid wayengumqambishelana.
Ngomhla ka-2013, wakhethwa kwiNobel yoKhuseleko iNobel kunye noMntu we-TIME wamaphephancwadi, kodwa akazange aphumelele. Wanikwa umvuzo weFrentshi ngamalungelo amabhinqa, umvuzo we- Simone de Beauvoir , kwaye wenza uluhlu lwe-TIME lwabantu abangama-100 abachaphazelekayo emhlabeni jikelele.
NgoJulayi, wathetha kwiZizwe eziManyeneyo kwiSixeko saseNew York. Wayegqoka i-shawl eyayingumongameli wePakistani owabulawa nguBenazir Bhutto . IZizwe eziManyeneyo zivakalise ukuzalwa kwakhe "usuku lweMalala."
NginguMalala, i-autobiografi yakhe, yapapashwa yawa, kwaye ngoku uneminyaka engama-16 ubudala wayesebenzisa imali enkulu yesiseko sayo.
Wathetha ngo-2014 ngentliziyo yakhe ekuthunjweni, nje kuphela emva kokuba adutshulwa, amantombazana angama-200 eNigeria elinye iqela elixakekayo, iBoko Haram, kwisikolo samantombazana
INdel Peace Prize
Ngo-Oktobha ka-2014, uMalala Yousafzai wanikezwa iNkqabiso yoxolo lweNobel, kunye noKailash Satyarthi , umgqugquzeli wamaHindu kwimfundo evela eNdiya. Ukubambisana kwamaMuslim kunye namaHindu, amaPakistani kunye namaNdiya, kwachazwa yiKomidi yeNobel njengomqondiso.
NgoSeptemba 2014, inyanga nje ngaphambi kokuba isimemezelo seNobel Peace Prize, iPakistan isimemezele ukuba babanjwe, emva kophando olude, amadoda alishumi ayenayo, phantsi kolawulo lukaMaulana Fazullah, intloko yasePakistan ePakistan, wenza umzamo wokubulala. Ngo-Apreli 2015, abayishumi babetyala kwaye bagwetywa.
Ukuqhutyelwa kweZenzo kunye neMfundo
UMalala uye waqhubeka ekhona kwimeko yomhlaba ekhumbuza ukubaluleka kwemfundo yamantombazana. I-Malala Fund iyaqhubeka isebenza neenkokheli zendawo ukukhuthaza imfundo elinganayo, ukuxhasa abesetyhini kunye namantombazana ekufumaneni imfundo, nasekukhuthazeni umthetho ukuseka ithuba elifanayo lemfundo.
Kuye kwapapashwa iincwadi ezininzi zezingane malunga neMalala, kubandakanywa ngo-2016 Ukuze ilungelo lokufunda: Ibali leMalala Yousafzai .
Ngo-Apreli, ngo-2017, wanyulwa nguMthunywa weZizwe zoManyano weZizwe eziManyeneyo.
Uthumela ngezihlandlo kwi-Twitter, apho wafumana ngo-2017 phantse abalandeli abayizigidi. Apho, ngo-2017, wazichaza ngokuthi "uneminyaka engama-20 ubudala ukukhuthaza imfundo yamantombazana kunye nokulingana kwabasetyhini; Umthunywa woxolo we-UN | umsunguli @MalalaFund. "
NgoSeptemba 25, 2017, uMalala Yousafzai ufumene i-Wonk yoNyaka we-Award yi-American University, wathetha khona. Kwakhona ngoSeptemba, wayeqala ixesha lakhe njengesikolo esitsha sekholeji, njengomfundi waseYunivesithi yaseOxford. Kwimodeli yesimanje, wacela icebiso malunga nokokuzisa nge-Twitter hashtag, #HelpMalalaPack.
Imfazwe Yehlabathi II: uLieutenant Colonel Otto Skorzeny
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya: iMarquis de Montcalm
Abafazi beXesha leXhumi
Tituba kunye ne-Salem Witch Trials
ULouis I. Kahn, uNkulumbuso wamanje
Ukuqhawula i-Broom: Ukutshata kweBesom
IGrove City College i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Radioactive I-Fiesta Iare?
Isingeniso kwi-Shading Pending
Hlela umboniso weeNzobo zakho
UJohn Tyler, uNkulunkulunkulu wokuqala we-Vice-President ukuba abe nguMongameli ngokukhawuleza
I-Dinosaurs kunye neDragons: Ibali leNene
Ukufakwa kweGlasi kunye neMbali yabasetyhini
Iifayili F-1, F-3, J-1, M-1 y M-3 para estudiar esikolweni esiphakamileyo kwi-EE.UU.
Inkqubo yokuSebenzisa amanzi ngeMithi